नेपालका दलहरु हिमाली यति हुन्
कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासद्धारा (नोभेम्बर दोस्रो हप्ता २०१२ मा) आयोजना गरिएको "नेपालमा ब्यापार तथा लगानीका अवसरहर" बिषायक ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बिदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि नेपाल प्रमुख गन्तब्य भएको बताएका छन् । क्षेत्रीले सो सेमीनारमा लगानी बोर्डले लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिरहेको र यसले पब्लिक, प्राईभेट, पार्टनर सीपलाई प्रथमिकता दिइएको बताउदै कोरियन लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न अह्वान पनि गरेका थिए । यसै सिलसिलामा देशको समसामयिक आर्थिक, राजनीतिक बिषयमा पत्रकार देवेन्द्र सम्बाहाम्फेले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत छः
१. यो अन्तर्राष्ट्रिय सेमीनार कस्तो रह्यो त ?
देशमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारले राम्रो वातावरण बनाउन गरेको प्रयत्न र कोरियाका लागि नेपाली राजदूत कमानसिंह लामाज्यूको प्रयासमा आयोजना गरिएको यो सेमीनार धेरै अर्थमा सफल रह्यो । सेमीनारमा हामीले लगानी सम्बन्धी हाम्रो नीति स्पष्ट गर्ने मौका पनि पायौं । धेरै सहभागि संभावित लगानीकर्ताहरुले उत्साह पूर्वक जानकारी लिएका थिए । साथै धेरै प्रतिष्ठित कोरियन नागरिकहरुले पनि नेपाललाई असाध्यै माया गर्नु हुदोरहेछ । देशमा संक्रमणालीन परिस्थतिमा पनि लगानीकर्ताहरुले जुन प्रकारले चाख राख्नु भएको छ यो हाम्रो लागि सकरात्मक संकेत हो । र नेपालमा पहिला नै लगानी गरिसकेका उद्योगपतिहरु थप लगानी गर्न इच्छुक रहेछन भन्ने कुरा पनि थाहा भयो । यो हिसाबले सेमीनार अत्यन्त सफल रहेको ठान्दछु ।
२.कोरियाको भौतिक बिकास देखेर कस्तो अनुभुति भयो त ?
राष्ट्रबैंकको कर्मचारीको हैसियतले १९८२ मा यहा १५ दिन बिताउने मौका पाएको थिए । त्यतिबेलाको र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने कोरियाले अकल्पनीय बिकास गरेको मान्नु पर्दछ । जहाजबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै हामीले बिज्ञान प्रविधिको तहल्का देख्यौं । यहाका चौडा सडक, प्रचार सामाग्री,हाइलाईज बिल्डिङहरु यूरोपीयन,नर्थ अमेरिकन देशहरु भन्दा कम लागेन । यसले अझ निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ । यो छोटो समयमा यसले बिकास गरेको छ । सन १९५६ मा हाम्रो र कोरियाको जिडिपी एउटै थियो तर अहिलेको फरकपना तुलना गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ । यसबाट हामीले प्रेरणा लिन जरुरी छ ।
३. बाह्य लगानी आकर्षणको लागि सरकारले तोकेको नीतिहरु के के हुन ?
हामीले बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई अरु देशबाट पाएको सुविधा भन्दा बढी दिने भनेका छौ । साथै बिगतमा भएका कमि कम्जोरीहरुलाई हटाएर निर्णय प्रकृयालाई छिटो छरितो बनाउने छौ । र यस सम्बन्धी सबै खालका असुविधाहरुलाई लगानी बोर्डमार्फत समाधान गर्ने भनेका छौं । लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित बनाउन सरकारले बिभिन्न नीतिहरु तय पनि गरेको छ । उनीहरुलाई प्रकृयागत र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न अम्ब्रेला एक्ट बनाउने तयारी पनि गरेका छौं । सरकारले पनि राजनीतिक महौललाई भन्दा आर्थिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिए अनुसार नै लगानी बर्ष २०१२/१३ घोषण गरिएको हो भने बिदेशमा रहेका हाम्रा मिसनहरुलाई पनि आर्थिक कुटनीति तर्फ अगाडी बढ्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
४.बाह्य लगानीको प्राथमिक क्षेत्रहरु के के हुन ?
हामीले बाह्य लगनीका लागि ५० क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको भए पनि जलबिद्युतमा मुख्यरुपमा जोड दिएका छौ । किनभने दिनदिनै आर्थिक गतिबिधिहरु बढिरहेकाले बिद्युतको खपत झन बढ्दै गएको छ । संचार,यतायत, खानेपानी,भौतिक संरचना निर्माण जस्ता बिकासका पूर्वाधारहरुको निमाणमा पनि बिद्युतको नभई हुदैन । औद्योगिक बिकासका लागि पनि यो त्यतिकै महत्वको छ । यसको उत्पादन पर्याप्त भयो भने हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौं । यहि हाम्रो प्रयासले अब तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ शुन्यमा बिन्दुमा पुर्याउने रणनीति सरकारको रहेको छ । बिद्युत पछि हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसपछि पर्यटन, सेवा, यतायत आदि क्षेत्रहरुमा आधारित रहेर संभावित लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्ने वातावरण बनाईरहेका छौं ।
५. केहि दलहरुले बाह्य लगानीको बिरोध पनि गरेका छन् नी ?
हो, यस्ता आवाजहरु पनि बेला बेला आउने गरेका छन् । तर कुरा के हो भने हामीले आफू लगानी गर्नपनि नसक्ने अनि बाह्य लगानीलाई पनि स्वीकार नगर्ने हो भने हामीले ठूलो संकट भोग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै कतिपय अन्र्तराष्ट्रिय प्रकाशनहरुले गरिबीको हिसाबले नेपाल एकदम दुखलाग्दो परिस्थितिमा जादैछ भनेका छन् । यो स्थितिमा बाह्य लगानीको बिरोध गर्नु भनेको त्यो दुख लाग्दो परिस्थितीलाई निम्तो दिनु हो । हामीले निस्वार्थ के बुझ्न जरुरी छ भने बाह्य लगानी भयो भने दु्रतत्तर बिकास,रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ । भारत र चीनको आर्थीक बृद्धिदर २ अंकमा रहेको छ भने हामी त्यसको आधीमा पनि छैनौं । यस्तो अवस्थामा संभावित किसिमका बाह्य लगानीलाई अस्वीकार गर्यौ भने हामी जहिल्यै पछि रहन्छौं ।
६.लोकतन्त्र आएपछि एउटा बजेट पनि सहजरुपले आएका छैन नी ?
हामीले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन संयूक्त भूमिका खेलेको भए पनि त्यसबाट आएको राजनीतिक परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न राजनीतिक दलहरु लागि परेका छन् । आन्तरिम संविधानमा सक्रमणकालमा सबै मिलेर सरकार चलाउने उल्लेख भए पनि दलहरुले त्यसलाई बिर्सिदिए । बरु विभिन्न शक्ति पुन्जहरुलाई आफ्नो बशमा पारेर सरकार गिराउने अभ्यासमा तल्लिन भए । त्यसैले संविधान निर्माण गर्न सकेनौ । अझ समय घर्किन्दै गएपछि त्यो राजनीतिक परिवर्तन केका लागि थियो भन्ने कुरा नै दलहरुले बिर्सन्दै गएका कारण देशको आर्थिक बिकास र बजेटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यौ र सहजरुपले बजेट आउन नसकेको हो ।
७. दलहरु सहमति भन्छन् तर सहमति गर्दैनन् किन होला ?
दलहरुको सहमतिलाई मैले हिमाली यती भनेको छु । जसरी यतीको अस्तित्व छ तर पाउन दुर्लभ छ त्यसरी नै सहमतिको अस्तित्व छ तर दलहरु गर्दैनन् । यो नहुनुको मुख्य कारण दलगत स्वार्थ नै हो ।
८. दलहरुबिच सहमति भएको छैन, राष्ट्रपतिले पनि बजेटका लगि दलहरुको सहमति भन्नु भएको छ यस्तो अवस्थामा बजेट कसरी आउन्छ त?
दलहरुले आआफ्ना स्वार्थ छोडेर पनि बजेटका लागि सहमतिमा आउनु पर्छ । र बिपक्षी दलहरु जतिसुकै कठोर बने पनि सरकारले सहमति गराउन सबै खालको प्रयास गर्ने छ । सरकार आफ्नो प्रयासमा असफल भयो भने बजेट तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा लगेर बुझाउछ अनि प्रतिकृया हेर्छ ।
९.राष्ट्रपतिद्धारा बजेट फिर्ता भए के हुन्छ त ?
प्रशासन यन्त्र ,शान्ति सुरक्षा,शिक्षण संस्था ,अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले तलव पाउदैनन् र यी निकायहरु सबै ठप्प हुन्छ । सरकारले खर्च गर्न नपाएपछि कर्मचारीले कसरी काम गर्छन् ? सबैको आर्थिक अवस्था सम्पन्न छैन । तलव लिएर बिहान बेलुकीको जोह गर्ने धेरै कर्मचारी छन् । यस्तो अवस्था हुने भएकाले निर्णय गर्ने निकायले सबैकुरा ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मेरो छ ।
१०. बजेटको प्रवृति चाहि कस्तो छ नि ?
गत ४ महिनामा खर्च भएको एक तिहाईसमेत थपेर हामीले पूर्ण बजेट ल्याउन लागेका छौं । यो आर्थिक बर्ष तीन बर्षे योजनाको आखिरी बर्ष भएकाले तीन बर्ष अघि नै यसको बिशेषताहरु तय भएका हुन । आन्तरिम संविधानले हामी संघीयतामा जादैछौं भनेर परिभाषित गरेकाले अहिले देखि नै यसकौ प्रयास स्वरुप समावेशी बिकास भनेर हामीले लक्ष राखेका छौं । यसको अर्थ जातीय,क्षेत्रीय,लैङ्गीक र उत्पीडित बर्गलाई राज्यको अस्तित्व बोध गराउन रोजगारउन्मुख,समावेशी आर्थिक बृद्धि यो बजेटको प्रमुख लक्ष रहेको छ । त्यसमा हामीले दोश्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल,फास्ट ट्र्याक,मध्य पहाडी लोक मार्ग जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता र समृद्धिका केहि आयोजनाहरुलाई रकम र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने गरि तर्जुमा गरेका छौं ।
११. संघीयतामा प्रदेश धेरै भए धान्न सकिन्न भनिन्छ नि वास्तविकता के हो ?
केन्द्रीय सरकारले मात्र प्रदेशको सबै आर्थिक भार बहन गर्नु पर्ने अवस्थामा धेरै प्रदेश हुदा समस्या हुने हो तर संघीयतामा त्यस्तो हुदैन । प्रदेशहरुले पनि आफ्नो आर्थिक बृद्धिको निम्ति श्रोत साधन जुटाउन्छन् । श्रोत र साधन जुटाउन र त्यसको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा प्रदेशको संख्या धेरै भए पनि समस्या हुदैन । यसका लागि केन्द्र सरकारले ठोस रुपमा केन्द्रिकृत योजना बनाएर कार्यन्वयन गराउनु पर्छ ।
१२. आर्थिक हिसाबले नेपालमा कति प्रदेश चाहि ठीक होला त ?
राज्यपुन संरचना आयोगले १४ प्रदेश सिफरिस गरेको हो । यो आधिकारिक निकाय पनि हो । त्यसैले यसले तोकेको संख्यालाई धेरैले ठीक पनि मानेका छन् । त्यसपछि ६,१० र ११ प्रदेशका कुराहरु पनि आएका हुन् । तर यो बहसमै छ । किनभने संघीयतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न खोज्ने प्रवृतिहरु पनि देखा परेका छन् । केही दलहरुले संघीयता हाम्रो एजेण्डा होइन भनेर ठूलो स्वर पनि निकाल्दै छन् । यदी त्यस्तो हो भने राजनीतिक परिवर्तनको लक्षबाट बिमुख भएको मानिनेछ । यहि कारणले होला कतिपय दलहरुमा बिभाजन पनि आएको छ भने अरु दल पनि बिभाजनको संघारमा पुगेका छन् । यसमा आफ्नो अधिकार प्रति सचेत र उत्तरदायित्वप्रति उदासीन हुने प्रवृति हावी भएको छ । प्रदेशको हिसाबले हेर्ने हो भने बहुसंख्यक जनजातीहरुको पर्याप्त प्रतिनीधि हुने गरी परिकल्पना गर्नु उत्तम हुन्छ ।
१३.सरकारले हुन्डी करोबारलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको छ तर यसको बिकल्प बारे आजसम्म केहि खुलाएको छैन नी ?
यो बिषयमा सरकार गम्भिर रहेको छ । यसलाई संस्थागतरुपले प्रवाहित गर्नपर्छ भन्ने प्रयत्नमा छौं । संस्थागत रुपले संचालन गर्नसके यसमा रहेका बिकृतिहरु कम हुने छन् । अर्को कुरा सम्बन्धित मुलुकहरुको नियम कानुन पनि हावी हुने भएकाले ती नियमहरुमा भएका कमि कम्जोरीहरुलाई केलाएर एडिसनल एक्सरसाइज गर्ने प्रयासमा छौं । कोरियाको हकमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्यो भने यहाको सरकारले पनि त्यसलाई बिचार गर्नसक्ने स्थिति रहेको छ । यसको सहजीकरणको लागि हामी बाटो खोजि रहेका छौं ।
१४. नेपालमा आर्थिक बिकास नहुनुको खास कारण के होला?
हाम्रो आर्थिक बिकास नभएकै कारण चीन र भारतको उच्च आर्थिक बृद्धिदरको तुलनामा हामी खस्किन्दै गएका छौं । यो स्थितिलाई मूल्याङकन गरेर नै प्रधानमन्त्री ज्यूले दुई अंकको अर्थिक बृद्धि गर्नु पर्छ भन्नु भएको हो । तर यसलाई अर्कौ ढङले पनि मान्छेहरुले आलोचना गरे । सोचे अनुसार आर्थिक बिकास नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । यो अस्थिरताप्रति बाह्य लगानीकर्ताहरु पनि दिक्क भएका छन् । ‘दश बर्षमा दशवटा सरकारको अनुभूति गरें’ भनेर त हिजो कार्यक्रममा नै पनि एकजना कोरियन उद्योगपतिले भन्नु भयो । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक नीति र प्राथमिकताहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भने मूल्याङकन तथा अनुगमनमा समेत ढिलासुस्ति हुन जान्छ । सोचे अनुसारको आर्थिबृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा राजनीतिक संक्रमण नै हो ।
१५. राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरुमा प्रभावकारी अनुगमन र समन्वय नभएकै हो त ?
राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरु भन्नाले १५ करोड भन्दा माथिको खर्च अर्थमन्त्रालयले पनि अनुगमन गर्दछ र आवश्यकता महसुस भए प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले पनि अनुगमन गर्दछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले कानुनत सबै आयोजनाहरुको अनुगमन गर्दछ । यति हुदा हुदै पनि केहि योजना आयोजनाहरुमा अनुगमन गर्ने निकाय कम्जोर भएको हो कि भनेर बाहिरबाट जुन आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले हामीलाई पनि पछि फर्केर हेर्नु पर्ने भयो भन्ने लागि रहेको छ । सहि अनुगमन भएन भने योजनाहरुमा धाधली हुने मात्र होइन समयमै काम नसकिने पनि हुन्छ ।
१६. योजना छनौट र बर्गीकरणमा राजनीतिक दवाब कतिको आउन्छन्?
आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई प्रभाव पर्न केहि परियोजनाहरु लाने महत्वकांक्षा राजनीति गर्नेहरुमा रहनु स्वभबिक नै हो । तर कुनैपनि योजना छनौटका लागि मुख्य रुपमा त्यसको श्रोत र साधनलाई हेरिन्छ र अझ योजना आयोगले तय गरेको नीतिभित्र परे मात्र छनौट हुनसक्छ । त्यसैले त्यस्ता दवाबलाई प्राथमिकता दिने कुरै आउदैन । दवाबको पछि लाग्न थालियो भने मुलुकको समग्र प्रतिनीधित्व गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यो अप्ठ्यारोमा मुलुक र आफूलाई पार्ने मेरो लक्ष छैन ।
१७.औद्योगिक क्षेत्रबाट जीडिपी योगदानमा न्यूनता आएको छ नी ?
हो जीडीपी बृद्धिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ११ बाट ह्रास भएर ६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो दुखद कुरा हो । यसको प्रमुख कारण फेरि घुमेर राजीतिक संक्रमण संगै जोडिन्छ । अर्को कुरा उद्योगहरुमा नियमित बिद्युत आपूर्ति पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले बाह्य लगानीमा उर्जालाई प्राथमिकतामा राखेका हौं ।